IP2 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိသောခိုင်မာသည့် Ulefone Armor 68S ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် Androidsis
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Ulefone Armor2ကိုစတင်ပြီးနောက်ကုမ္ပဏီသည်ရေ၊ ခြစ်ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်နှင့်ရေစက်ကဲ့သို့သောအခက်ခဲဆုံးစမ်းသပ်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့် IP2 လက်မှတ်ပါသည့်ကြံ့ခိုင်ပြီးအကြမ်းခံသော Armor 68S ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်။
ဤစက်ပစ္စည်းသည် Ulefone Armor2၏သတ်မှတ်ချက်များကိုတိုးတက်စေသည်IP68 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အတူတူပင်။ ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
ဒီအစွမ်းထက်ပြီးအားကောင်းတဲ့ terminal ကိုစတင်ခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, Ulefone သည်ဗီဒီယို၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်တင်ပြ။
ဤပစ္စည်းသည် ၅ လက်မ Sharp FullHD မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ Corning Gorilla Glass5ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။
၎င်းတွင်ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုအနေဖြင့် 25Ghz ရှိ Core ရှစ်ခုပါရှိသော Mediatek Helio P6737 MT1.5T ချစ်ပ်ကိုအသုံးပြုထားသည်။ 2GB RAM နှင့် 16GB ၏သိုလှောင်မှုနေရာလွတ်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် microSD ကဒ်ဖြင့် 256GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံအပိုင်းနှင့်ပတ်သက်။ , ဒီစက်မှာ 13 megapixel sensor ရှိတယ် အလင်းအားနည်းသောနေရာများအတွက်အားကောင်းသော LED Flash ပါ ၀ င်သည့်နောက်ဘက်တွင်။ ရှေ့ဘက်မှာ selfie နဲ့ video chats တွေအတွက် 8 megapixel အာရုံခံကိရိယာ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Android 7.0 Nougat ကို run သည် တစ် ဦး operating system အဖြစ်။
Ulefone ချပ်ဝတ်တန်ဆာ 2
သတိပြုသင့်ပါတယ် ၎င်း၏ယခင်နီးပါးတူညီဒီဇိုင်းရှိပါတယ်, Ulefone သံချပ်ကာ2၏ရန်။
အလယ်အလတ်အကွာအဝေး၏အခြားပုံမှန်ဝိသေသလက္ခဏာများအနက်, ဒီဖုန်းထဲမှာလက်ဗွေဖတ်စက်ရှိတယ် NFC နည်းပညာမျက်နှာပြင်အောက်တွင်ရှိသည်။
လည်း ကြီးမားသော 4.700mAh ဘက်ထရီရှိသည် ၎င်းသည်အသုံးပြုမှုကိုတောင်းဆိုသည့်အနည်းဆုံးပြproblemနာမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုဆီးတားလိမ့်မည်။
ဒီဆိပ်ကမ်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ Ulephone တရားဝင်စာမျက်နှာ.
ပြီးတော့, ဒီအားကောင်းတဲ့ Mid-range ဖုန်းကို ၀ ယ်ယူဖို့၊ ဒီ link ကို, ဟိုမှာ သင်အားဒေါ်လာ ၁၉၉.၉၉ ဖြင့်သာ Aliexpress တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » IP2 လက်မှတ်ပါ ၀ င်သည့်အားကောင်းသော Ulefone Armor 68S ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်